Dowladda Faderaalka Soomaaliya oo u yeertay safiirka Kenya ee Soomaaliya – Radio Daljir
Dowladda Faderaalka Soomaaliya oo u yeertay safiirka Kenya ee Soomaaliya
Luulyo 1, 2019 2:45 g 0
Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda faderaalka Soomaaliya ayaa maalinimadii Axadda ee shalay jund, 30. u yeertay safiirka dowladda Kenya ee Soomaaliya L.t. General (Rtd) Lucas Tumbo, waxaana ay u gacan gelisay qoraal cabasho ah oo ay dowladda Soomaaliya ay ka muujisay qoraal uu soo dhigay boggiisa Tweetka xogahayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Mr. Macharia Kamau, on 27 June 2019.
“Waxaa aynu u aragnaa qoraalkaasi inuu ahaa mid xadgudub ku ah madaxbanaanida, midnimada iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya, islamar ahaantaana uu wax yeelo ku yahay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waxaana intaasi uu ku daray qoraalka.
“Soomaaliya waxaa ay u taagantahay daris wanaag, tixgelin laba geesood ah, iyo iskaashi dhow oo ay yeeshaan dowladaha dariska la’ ah, waxaana ay Kenya ay ka filayaan sidaasi si la mid ah.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Dowladda Faderaalka Soomaaliya.
Haddaba Maxay Dowladda Faderaalka Soomaaliya ay ka carootay?
Dowladda Kenya oo damac uu kaga jiro dhul boobka badda Soomaaliya ayaa dhowaan bilowday siyaasadeeda inay kusoo darto iska horkeenid maamulka Somaliland iyo Dowladda Dhexe ee Soomaaliya.
Bogga wasaardda arrimaha dibadda Kenya ee Twitterka ayaa lagu sheegay in kulan uu dhexmaray xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, kaasi looga
wadahadlay xiriirka iyo danaha laba geesoodka ee labada dalka, iyo xoojinta wada shaqaynta, sida lagu yiri qoraalka, kaasi oo u muuqda mid dowladda Kenya dhul boobkeeda ay culays uga dhigayso dowladda Soomaaliya aqoonsi ay siiso maamulka Somaliland oo diidan midnimada dalka Soomaaliya.
Qoraalka ay dowladda Soomaaliya ka carootay